merolagani - लगानीको दृष्टिकोण बदल्ने पुस्तक ‘द वारेन बफेट वे’ को सारंश
Jan 20, 2021 07:08 PM Merolagani
स्टक मार्केटका बादशाहा मानिने वारेन बफेटको लगानीका दृष्टिकोणहरु समेतिएको यो पुस्तक रोबर्ट जी ह्यागस्ट्रमले लेखेका हुन्। पुस्तकमा बफेट कसरी सफल लगानीकर्ता भए? स्टक खरिद गर्न उनी के कस्तो रणनीति अपनाउए? जस्ता विषयवस्तुलाई यस पुस्तकमा समेतिएको छ। शुरु गरौँ यसै पुस्तकको सारंशको पहिलो भागः
वारेन बफेटले सन् १९५६ आफ्नो लगानी फर्म शुरु गरे। त्यसको सुरुवातको लगानी मात्र १०० डलर थियो। १९९३ सम्ममा यो पैसा ८.३ बिलियन डलर बन्यो। १९६५ मा, उनले आफ्नो लगानीको लागि होल्डिङ्ग फर्मको रुपमा बर्कशायर हाथवे फर्म प्रयोग गरे।
वारेनले लगानी गर्नुअघि प्रत्येक फर्मको विश्लेषण गर्दछ। उनी बजारको अध्ययन गर्दैनन्, त्यसको सट्टा उनी व्यवसाय विश्लेषण गर्छन्।
‘नो’ भन्न सक्ने क्षमताको विकास गर्नुहोस्। समय ठिक छैन भने कुनै सम्झौता नगर्नुहोस्। सहि समयको प्रतिक्षा गर्नुहोस्। सस्तो मूल्यमा राम्रो व्यवसायको सानो समूह खरिद गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ। अध्याधिक विविध पोर्टफोलियोको छनौट नगर्नुहोस्, मात्र तनाव हुनेछ।
शेयर बजारलाई धेरै ध्यान दिन छोड्नुहोस्। भावनाहरुले व्यापारलाई असर गर्छ। दैनिक आधारमा शेयर मूल्यको बारे चिन्ता नलिनुहोस्। त्यसले खास फरक पर्दैन। अर्थव्यवस्थाको बारेमा चिन्ता गर्न छोड्नुहोस्। पूरै व्यवसाय खरिद गर्नु र यसको शेयर प्राप्त गर्नु फरक हुँदैन।
द वारेन बफेट वे सारंश
अमेरिकाको सबैभन्दा धनी मानिस
वारेन बफेट सन् १९९३ मा अमेरिकाको सबैभन्दा धनी मानिस बने। त्यसबेला उनको नेटवर्थ ८.३ विलियन डलर थियो। वारेन अझै पनि ती ६१ अमेरिकी अरबपतिमध्ये एक हुन् जसले शेयरबाट पैसा कमाएका छन्। उनले १९५६ मा केबल १०० डलर लगानीबाट लगानी फर्म शुरु गरेका थिए। सात सीमित पार्टनरहरुले फण्डमा १ लाख ५ हजार डलर थपे। त्यसको १३ वर्षपछि, उनले २५ मिलियन डलर बनाए। त्यसपछिका वर्षहरुमा, त्यो रकम बढेर ८.३ विलियन डलर पुग्यो।
सफलताको लागि बफेटको रणनीति
वारेनको सफलताको कुञ्जीले कडा व्यवसायिक अवधारणामा केन्द्रित रणनीति अनुसरण गर्दै थियो। १९६५ को सुरुवातमा, उनले अन्य लगानीलाई विस्तार गर्नका लागि बर्कशायर हाथवे प्रयोग गरे। दुई बीमा कम्पनीमा शेयर खरिद गर्दा, उनले अरु धेरै राम्रा लगानी गरे। यसमा ब्लु चिप टिकटहरु, नेब्रास्का फर्नीचर मार्ट, द बफेलो न्यूज र यस्तै।
प्रत्येक पटक, उनले व्यवसायलाई ध्यानपूर्वक विश्लेषण गरे। यसमा शेयर मूल्यको सट्टा व्यवस्थापन र आम्दानीको परीक्षण समावेश थियो। केवल पूर्ण रुपमा निश्चित भएपछि, के उनले यसमा लगानी गर्ने निर्णय गरे? बर्कशायर हाथवेले व्यापार विस्तारका लागि ती व्यवसायहरुबाट कमाईको रुपमा धन प्राप्त गरे।
दुई प्रारम्भिक प्रभाव
बफेटले आफ्नो लगानीको रणनीति विकास गरिरहेको समयमा दुई व्यक्तिहरुको गहिरो प्रभाव गरेको थियो। बेन्जामिन ग्राहम वित्तीय विश्लेषणका बाबु थिए। बफेटले यस पुस्तक ‘द बफेट वे’ मार्फत शेयर लगानीलाई व्यवसाय लगानीको रुपमा लिने बारेमा पहिलो पटक बोलेका हुन्। यस पुस्तक अनुसार, एक राम्रो लगानी त्यो हो जसलाई बुद्धिमानीपूर्वक उठाइएको होस् र यसमा सामान्य शेयरका विविध पोर्टफोलियो होस्। यो पोर्टफोलियो सूपथ मूल्यको हुनु जरुरी छ। ग्राहम एक लगानीको बारे यसको फाइदाको मूल्याङ्कन गर्दै जानकारी संकलन गर्ने महत्वमा जोड दिन्छन्। त्यसपछि उनले मानिसहरुलाई स्टकको प्रतिफल दर पत्ता लगाएर लगानी गर्न सुझाव दिन्छन्। ग्राहम भन्छन्, यदि लगानीकर्ताहरुले अन्डरभ्यालुड स्टक फेला पारे भने उनीहरुलाई धेरै फाइदा हुन्छ।
बफेटको जीवनमा प्रभाव पारेका अर्का व्यक्ति हुन्, फिलिप फिशर। फिशर एक लगानी सल्लाहकार हुन जसले आफ्नो करियर १९२० दशकको अन्त्यतिर गरेका थिए। बफेटले फिशरबाट असाधारण क्षमता भएको व्यवसायमा लगानी गर्नुको महत्वको बारेमा सके। उनले कम्पनीमा सक्षम व्यवस्थापनको महत्व पनि बुझे। फिशरलाई ती कम्पनीहरुले प्रभावित पार्छ जसले बजारको औषतभन्दा चाँडै नाफा र बिक्रीमा वृद्धि गर्न सक्छ। उनी त्यस्ता कम्पनीहरु खोज्थे जोसँग बढी क्षमताका उत्पादनहरु छन्। यी उत्पादनहरुले भविष्यमा कम्पनीको बिक्री बढाउन मद्दत गर्न सक्थे। यिनीहरुसँग नाफाको मार्जिन धेरै हुन्छ। उनीहरु कष्ट इफेक्टीभ हुन्छन् र स्वस्थ लेखा नियन्त्रण हुन्छ।
यी लगानीका गुरुहरु र आफ्नो अनुभवहरुबाट, वारेनले धेरै कुरा सिके। वारेनले लगानी गर्नु अघि कम्पनीको विश्लेषण गर्नुको महत्वबारे थाहा पाए। उनले वित्तीय विवरणका साथै व्यवस्थापन समूहको योग्यतामा पनि समान रुपमा ध्यान दिन सिके। आफ्नो करियरमा उनले धेरै मानिसहरुलाई चिने। त्यसैले, आफुले अध्ययन गरिरहेको कम्पनीको वास्तविक प्रदर्शनी थाहा पाउन सजिलो भयो। वारेनले स्टक मार्केटमा हुने सिफ्टलाई बेवास्ता गर्न पनि सिके। यसरी उनी कम्पनीको क्षमताबारे आफै निर्णय गर्न सिके। उनले थाहा पाए कि यदि कम्पनीको हालको मूल्यले लगानी गर्न उपयुक्त बनाउँछ भने, उनी लगानी गर्नका लागि सहि समयको प्रतिक्षा गर्छन्।
बजारलाई बेवास्ता गर्नुस्
वारेनले आफ्नो करियारभरी नै स्टक मार्केटलाई बेवास्ता गरे। उनी दाबी गर्छन् कि भावना, विशेष गरी, लोभ र भय, ले बजारमा प्रभाव पार्छ। त्यसैले, एक स्टकको मूल्य उसको व्यवसायको वास्तविक मूल्यसँग मेल नहुन सक्छ। स्पेकुलेटरहरु मूल्य प्रक्षेपण गर्दै त्यस्तो उतारचढावबाट फाइदा लिन्छन्। तर दीर्घकालमा, स्टकहरुले व्यवसायिक मूल्यलाई जित्न सक्दैनन्। त्यसैले, समय बित्दै गएपछि, बुद्धिमान व्यवसायी लगानीकर्ताजस्तै स्पेकुलेटरले कमाउन सक्दैनन्।
धेरै जसो लगानीकर्ता र मनी म्यानेजरहरु झुण्ड मानसिकताका हुन्छन्। उनीहरु बजारमा आएको सानो परिवर्तनमा पनि प्रतिक्रिया जनाउँछन्। तिनीहरुलाई विपत्तिमा पुर्याउन सरल छ। तर, स्मार्ट लगानीकर्ता भीडलाई नपछ्याउन तयार हुन्छ। ऊ अरुले बेवास्ता गरिरहेको बेला पनि ठूलो खरिद गर्छ। प्रायः यो नै राम्रो कम्पनीको शेयर सस्तोमा उठाउने मौका हुन्छ। आर्थिक विचलनलाई बेवास्ता गर्नुहोस्। किनभने यो एक प्रतिस्पर्धामा दौडिएको घोडा जस्तै हो। यो कुनै दिन सही हुन्छ र कुनै अर्को दिन गलत। कम्पनीको लामो अवधिको प्रदर्शन महत्वपूर्ण छ। आर्थिक चक्रहरु आफैमा महत्वपूर्ण नभएपनि तपाई मुद्रास्फितीबारे सचक हुनुपर्छ। मुद्रास्फितीले कम्पनीको प्रतिफल दरलाई प्रभाव पार्न सक्ने हुनाले, लगानीकर्ताले त्योसँग कम्पनी कसरी सामना गरिरहेको छ भन्ने हेर्न जरुरी छ।